★မြန်မာ့အလင်း★: သနားတယ် ကုလားရယ်
ကုလားတွေကို သူတို့ဘာလူမျိုးလဲလို့ မေးကြည့်ပါ။ သူတို့ကိုသူတို့ မွတ်ဆလင်လူမျိုးလို့ ဖြေပါလိမ့်မယ်။ မွတ်ဆလင်ဆိုတာ အယူဝါဒတစ်ခုသာဖြစ်တယ်။ အဲဒါကို ကလေးကအစ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုလားတွေရဲ့ ဦးဏှောက်က ပုံမှန်မဟုတ်တော့ မသိရှာဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ သူတို့ရဲ့ အမျိုးကို မေ့ပျောက်နေပါပြီ။ မေ့တာထက်ပိုဆိုးတာ ကုလားကို အသားမည်းတယ်ဆိုပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင်က နှိပ်ကွပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်က ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ လူတွေက ကုလားတွေ။ နေရာက ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်းဘုတ်မှာရေးထားတဲ့ စာတွေက အာရပ်စာတွေ။ အင်္ဂလိပ်လိုလဲ ရေးသေးတယ်။ (အာရပ်နဲ့ အင်္ဂလိပ်ရဲ့ ဘုံကျွန်ကြီးဖြစ်နေပြီ ) ဘာကြောင့်ကုလားစာကို မတွေ့ရတာလဲ? ကုလားတွေဟာ သူတို့ ဖိုးဖွားစဉ်ဆက်ပြောဆိုတဲ့ Urdu ဘာသာစကားရှိပါတယ်။ Urdu အက္ခရာတွေလဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာရပ်တွေဟာ ကုလားပြည်ကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Urdu အက္ခရာတွေကို သင်ကြားခွင့်လုံးဝ ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ ပိတ်ပင်ရုံတင်မကပါဘူး။ Urdu စာလုံးပါတဲ့ အရာမှန်သမျှ မီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အာရပ် စာကိုပဲ အတင်းဇွတ်ကိုတင်ပါတယ်။
စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ။ ကိုယ်ပိုင် အက္ခရာရှိပါလျက်နဲ့ သွေးမတော် သားမစပ် အာရပ်အက္ခရာသုံးနေရတဲ့ အဖြစ်ဟာ လူမျိုးရေးအရ ဘယ်လောက်အထိ ချိုးနှိမ်ခံထားရလဲဆိုတာ သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မွတ်ဆလင်အဖြစ် အတင်းသွတ်သွင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ စာပေပျောက်တော့ လူမျိုးပျောက်တယ်ဆိုသလိုပါပဲ။ ကုလားတွေဟာ သူတို့အမျိုးကို မေ့ပျောက်ကုန်ပါပြီ။ (မွတ်ဆလင်လူမျိုးဆိုပဲ။ အဖြစ်ဆိုးလှချည်လား မောင်ကုလားရာ) အထက်ကပြောခဲ့သလို မိမိ ကုလားလူမျိုးကိုပဲ အသားမည်းတယ်ဆိုပြီး နှိမ်ချနေတဲ့အထိ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ အဲဒီထက် ပိုလို့ဆိုးတာက သူတို့ကို မတရားသတ်ဖြတ် မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ အာရပ်တွေကို စိတ်မနာပဲ . . . အာရပ်ကို မြင်ရင် သခင်တွေ့ရသလို အမြီးတနန့်နန့်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပါပဲ။ အဲဒီထက်ပို၍ . . . ပို၍ ဆိုးရွားသည်မှာ အာရပ်တွေအလိုကျ သူတို့အဖိုးအဖွားကိုးကွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစော်ကားသူတွေ . . . ဖျက်ဆီးသူတွေဖြစ်လာခြင်းပါပဲ။
ဒီအဖြစ်တွေကို လေ့လာကြည့်ရင် ကုလားတွေဟာ အမျိုးဖြုတ်ခံရတဲ့ အဖြစ်ထက်အများကြီး ဆိုးရွားပါတယ်။ သိပ်ပြီး သနားစရာကောင်းတဲ့ ကုလားတွေပဲနော်
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 6:25 AM
မြစ်နားရွာ အနီးရှိ နီလာစေတီတော် ဌာပနာ ဖေါက်ထွင်းခံ...
Bankers lobbied secretly to keep derivatives under...
ဖုဖု၊ ခူးရီ၊ မော်ဘိမာ
Kayaw is including of Karenni ethnic Burma,who are...
နာဂတောင်တန်းမှ မြန်မာလူမျိုးများ၏ သီချင်း
ဂျပန်မှာ ကျင်းပသည့် မြန်မာ့ လက်ဝေ့ပွဲများ
karmila dangdut sexy
ရွှေဥာဏ်တော် အလွန်စူးရှတဲ့ အာလာဟ်
မြန်မာ့သိုင်း နဲ့ လက်ဝှေ့
Myanmar Elephants on Parade in Singapore
US to sell ‘bunker buster’ bombs to South Korea
The cloud with no name: Meteorologists campaign to...
The Main Result of the “War on Terror”: The Destab...
Poll: Israeli gov’t most corrupt in world
Malaysian airport customs seize Bibles
Got rid of Islam
Mingalar Se Hnit Par
Bagan - the fabulous fairyland
North Korean Atomic Tests Lift Lid on Japan’s Nucl...
US ready for ‘conventional’ war with N. Korea
Iran officials accuse US over mosque bombing
Tway Ma Shaung vs Thomas Hentz Berger
Ahmadinejad To Obama: Iran Welcomes Change In U.S....